Prexo Alfa Preview | Martech Zone
M na a nnukwu ofufe nke Plaxo kemgbe m huru ya na nke mbu. Ana m edebe akwụkwọ adreesị n'ịntanetị na n'ịntanetị n'ihe dị ka ebe iri na abụọ, gụnyere ekwentị m. Na mgbakwunye enwere m akaụntụ LinkedIn. Ichebe ha niile bụ ihe itu egwu… ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka Plaxo.
Cheedị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla ị maara nọgidere na-enwe adreesị ozi ha na adreesị gị akwụkwọ ka ị ghara inwe aka ya… nke ahụ bụ Plaxo! '' Denye aha 'na kọntaktị gị' ọrụ ma ọ bụ ozi ụlọ na Plaxo na mgbe ọ bụla ị mekọrịta akwụkwọ adreesị gị, Plaxo na-elekọta ndị ọzọ. Enwere ọbụna de-duper nwere ọgụgụ isi ga-ejikọta ozi sitere na 2 ma ọ bụ karịa kaadị ma nye gị ohere ịlele njikọta ma kwado ya.
Banye m na Plaxo n'ehihie a wee nweta ihe ịtụnanya dị ịtụnanya - site na nbanye bụ ọkpụkpọ oku na Prexo Preview. Mgbe m pịrị ya, akpọbatara m na ihu ụlọ Plaxo ọhụụ mara mma - gụnyere akwụkwọ adreesị, kalenda, usoro mmekọrịta m niile yana ụfọdụ ihe ọhụụ ọhụụ, dị ka ozi ngwa ngwa sitere na ihe nchọgharị sitere na Meebo, ecards, aga-eme, ndetu, ihu igwe, eserese site na Yahoo! na kwa Pịa Kpọọ Voice over IP nke Jajah!
Maka onye ọ bụla na netwọkụ dịka m na-eme, akụrụngwa a ga-enwerịrị! Enwere m ike ịnweta ya site na mkpanaka ihe nchọgharị na njiri mara mma nke dị ngwa ma dịkwa mfe iji.
Mee 28, 2007 na 8: 41 PM
Yep! M hụrụ ya n'anya 🙂
Mee 29, 2007 na 4: 39 AM
You na-eji ọrụ adịchaghị? Fọdụ n'ime atụmatụ ndị dị oke ọnụ dị ka 'contact de-duper' bụ ihe kwesịrị ịdị n'ezie na ọrụ ọkọlọtọ, mana enwere m ike ịghọta ikpe azụmaahịa ihe kpatara na ọ bụghị. Mana enwere m mmasị n'echiche nke ijikọta na profaịlụ LinkedIn m.
Mobilenweta mkpanaka ga-abụkwa nnukwu uru, agbanyeghị na m na-eji iSync na Mac m iji mekọrịta akwụkwọ adreesị na N95 m. Ma ọ ga-eme ka ihe dị mfe ka ihe niile wee si n'otu ebe.
Mee 29, 2007 na 7: 52 AM
Ee, m na-akwụ ụgwọ maka ọrụ adịchaghị. Mmekọrịta ọhụrụ a ga - emekọrịta n’akwụkwọ adreesị Mac gị na iCal gị! Ihe de-duper kwesiri inwe, ekwere m.
Mee 29, 2007 na 11: 47 AM
Na na na, M na-a drankụ Kool-enyemaka na ebudatara toolbar maka Outlook. Ekwenyesiri m ike na nke a bụ ihe m na-achọ. Na-atọ ụtọ!
Mee 29, 2007 na 7: 43 PM
Gaghị enwe mmechuihu, Tony! Adịghị m duhie gị na nnabata, nri? 🙂
Mee 30, 2007 na 11: 06 AM
I meela, Doug.
Kwesịrị ịlele Ebee.com. A kpaliri m kọntaktị m niile Ebee.com. Ọ bụ a kpam kpam jụụ ngwa. Ọ bụ ihe plaxo kwesịrị ịbụ.
Etinyere m akwụkwọ ịkpọ oku na Spock, mana ahụghị m otu ọ ga - esi merie Plaxo! M ga-enye ya a ịkụ ọkpọ, ezie!